Qaar ka mid ah waxa Fedora ay noo keento 17 | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Qaybinta, GNU / Linux, Noticias
Warka ay ku dari doonto ayaa la daabacay Fedora 17 gudaha Mashruuca Wiki iyo sida lagu yaqaan qaybintaan, waxay noo keeni doontaa horumarinno xiiso leh oo mudan in la isku dayo.
Shaki la'aan mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ayaa ah dhaqaajinta feylasha iyo dejinta de / bin, / sbin y / lib a / usr, adeegsiga xiriiriyeyaal astaan ​​ah, wax horey looga wada hadlay maqaalkan. Tani waxay keeneysaa urur weyn iyo nadaafad nidaamka feylka, hadda waxay noqonaysaa sidan soo socota:
Shaqada tusaha kasta wuxuu noqon doonaa kuwan soo socda:
/ usr - Nidaamka rakibay; Faylasha La Wadaagi Karo; Akhriso Kaliya suurtagalnimada.
/ iwm - Xogta qaabeynta lama wadaagi karo.
/ var - Xog joogto ah, oo aan la wadaagi karin
/ orod - Xog kacsan, oo aan la wadaagi karin; Waxaa looga baahan yahay nidaamka faylka tmpfs.
Fedora 17 waxaa ku jira cibaaro kale oo badan, sida Kordhiyay 1.48, Gnome-Shell uma baahna xawaaraha 3D si loo fuliyo, btrfs by default, Isdhexgalka Better leh Xirmada xirmada, Nidaam cusub oo lagu hubinayo tayada ereyada sirta ah, iyo kuwo kale oo badan oo aan ka arki karno jadwalka soo socda:
80% Kordhiyay 1.48 Cusboonaysiinta Kordhi kor u kaca (ugu dambeeyay) sii deynta 1.48. 2011-12-17
0% Nidaamka Faylka ee BTRFS Ka dhig BTRFS nidaamka faylka caadiga ah ee rakibidda caadiga ah. 2011-11-15
75% Ka saarida ConsoleKit iyo Taageerada Kursiga otomaatiga ah Boorso boorsooyin yar oo nadiifin ah iyo hagaajinno dhammaantood la xiriira fadhiga iyo maaraynta kursiga. 2011-07-27
80% DRI2 Wadayaasha Kaliya Ku rar kaliya darawalada DRI2 3D ee F17. 2011-11-17
10% Soodejinta barnaamijka gnome-shell Samee gnome-shell oo la shaqeeya software-ka ku shaqeeya qalabka badankood]] 2011-11-21
100% Qoraalka 2 Khariidadaha Furaha khariidadaha m17n ee loogu talagalay luqadaha Indic waxay raacaan heerka naqshadda cusub ee Enhanced Inscript (Inscript2). 2011-11-15
100% Abuuritaanka KDE Plasma ku tiirsanaanta iyo Isdhexgalka xirmada xirmada Kudar ku tiirsanaanta otomaatiga ah ee RPM ee adeegyada la xiriira KDE Plasma iyo xirmooyinka PackageKit si loogu isticmaalo Plasma. 2011-12-03
50% Dhammaan u dhaqaaq / usr Bixi hab fudud oo aad ku dhajisan karto dhammaan nidaamka qalliinka lagu rakibay oo keliya-akhri, si toos ah u soo qaad, ama la wadaag inta u dhexeysa marti-geliyeyaal badan si loo badbaadiyo dayactirka iyo booska. 2011-11-22
80% ns-3 Qabille oo Shabakad ah Qabille oo sheybaar u ah shebekad gaar ah oo loogu talagalay nidaamyada internetka, oo loogu talagalay ugu horreyn cilmi baaris iyo adeegsi waxbarasho. 2011-12-05
30% SysV ilaa Systemd Ka soo rarida qoraalada sysVinit init ilaa faylasha unugyada nidaamsan. 2011-11-04
40% virio-scsi Qaab dhismeedka keydinta cusub ee KVM oo ku saleysan SCSI. 2011-07-14
Waxaan jeclaan lahaa iyo inta kale ee loo qaybiyo inay ku daydaan Fedora.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Qaar ka mid ah waxa Fedora 17 na keenaya
Hahahaha super Debian intaas in leeg ma keenayo huh ???? LOL
Sida had iyo jeer Fedora keento warar badan oo nooc kasta oo cusub ah
Warar aad u tiro badan oo mararka qaarkood dhibaatooyin keena!
Kahor intaadan rakibin Fedora, hubi in aan la sii deyn dhowr maalmood sababtoo ah haddii kale ...
Waxaan horey u isticmaalay Fedora dhibna kalama kulmin, runtii
Fedora, sida la og yahay, waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu khatarsan marka ay timaado isku dhafka astaamaha cusub iyo noocyadii ugu dambeeyay ee xirmooyinka. Taasi waa halka uu saldhig uga dhigo qayb ka mid ah haybtiisa iyo wanaaggiisa. Taasi waa sababta aysan nooga yaabin inay jirto khatar la kulanta dhibaato (gaar ahaan marka nooc cusub la soo saaray). Si kastaba ha noqotee had iyo jeer maahan sidaas. Xaaladdayda, tusaale ahaan, waxay ku dhimatay Fedora 14, laakiin si aad u wanaagsan ayaa leh qaababka 15 iyo 16 ee xasilloonida.
Ka fikiraya in la rakibo Debian, LMDE, Arch ama Fedora ... Muxuu yahay nuuradda ay Fedora 17 qaadi doonto?
Waxaan ubaahanahay kernel 3.2 si baahintaydu u shaqayso ...…
Ku jawaab Aeraulx
Ku rakib Arch, sii deynta KISS
Waxaan haystay Arch, laakiin ma aanan heli karin xarun ballaadhan oo aan kula shaqeeyo ndiswrapper, aad ayaan uga yaraa darawalka Linux. Waa maxay jahwareerka haha, wax walbaa waa "mahadsanid" Apple ... kaliya taasi waa i fashilantay, oo fiiri, waan jeclahay Arch ...
Aan aragno haddii maalin uun aan helo ...
PS: Xaqiiqdii taabashada wax kujira rc.conf waxay xalineysaa wax walba Haha.
Waxaan kugula talinayaa inaad fiiriso liisaska isku waafaqsanaanta qalabka ka hor wax kasta oo kale
Maska ayaa la soo dejiyaa oo la soo ururiyaa haddii loo baahdo, taasi waa tan ugu yar, dhab ahaantii waxaa jira casharro fiican oo gaagaaban oo ku saabsan sida loo sameeyo taas 🙂
Pfff haddii Fedora uu yahay Rollign waxaan u maleynayaa inay iga saari laheyd qaansokeyga
Laakiin ma noqon doonto KISS
Fedora waxay leedahay bilowga ugu jilicsan uguna quruxda badan dhamaan distros…. laakiin waxay ku socotaa xawaare buuxa taasna aniga way ila socon kartaa. Maxay u sameyn waayaan duub ama ugu yaraan LTS? Ka waran waxyaabaha ku saleysan Fedora-ku-saleysan? Haddii Ubuntu wanaag iyo xumaan isku mid u qabtay.
Degdeg Ubuntu wuu socdaa
haa, laakiin uma dheereyso sida daaqadahaaga oo kale.
indho -indhayn dijo
si fiican, waxaan u isticmaalaa fedora 16 runtiina waa in fedora aysan waligey i niyad jabin, sida "daaqadaha Linux" had iyo jeer ay sameyso, taas oo ah, qaybinta ugu culus waa ubuntu, waana in la ogaadaa in aan haysto keydadkii tijaabada oo aan awooday oo xitaa sidaas ahayn Waxaan hayaa qaladaad ^
Ku jawaab eyromy
Waxaan jeclaan lahaa inaan sidaas oo kale idhaahdo, madax xanuun badan ayaa i weheliyay Fedora 15 iyo 16, ilaa heer aan joojiyay isticmaalka Linux iyo barnaamijyada luuqadaha bilaashka ah. Ubuntu wuxuu si murugo leh u noqday wax aan jirin tan iyo daabacaaddii 11.x
Ku jawaab amarante
Xavier ee Masiixa dijo
Dhawr bilood ka hor ayaan ka beddelay daaqadaha una beddelay Linux, waxaan bilaabay tijaabinta ubuntu, oo markii hore waan ka helay, laakiin markii aan isku dayay inaan ka faa'iideysto awoodaha barnaamijyada qaar ee ay keensato, aad bay iigu adkaatay. Tusaale ahaan, barnaamijyadu markay shaqeynayeen aniga ayey ii xirnaayeen, markii hore waxay ahayd qas weyn in la kaydiyo wifi, dhibaatooyinka kale, waxaan go aansaday ka dib inaan isku dayo fedora 15, waayo aragnimadu aad ugama duwana waxyaabaha qaarkood, gaar ahaan qaabeynta qaabeynta internetka, oo aan u arko inuu ka xun yahay ubuntu, laakiin dhibaatooyinka qaar ayaa is beddelay gaar ahaan qaybta xasilloonida. Qodobka udub dhexaad u ah faaladayda ayaa ah in isticmaalaha caadiga ah ama kan dhaqameed dhibaatooyinka si aad ah loo yareeyay ilaa heer ay ku dhiiraneyso in la yiraahdo hal qeybinta Linux ayaa ka wanaagsan mid kale (Waan ogahay uun ubuntu iyo fedora) Si kastaba ha noqotee, weli waxaan haystaa dhibaatooyin badan, maxaa yeelay qayb weyn oo ka mid ah waxyaabihii uu qabtay waxay u baahan yihiin barnaamijyo awood badan oo khaas ah (xisaabinta waxqabadka sare ee sayniska) iyo dhinacaas waxaan ka helay kala duwanaansho aad u weyn oo ku saabsan labada qaybinta, su'aal ayaa igu soo kordhay haddii qaybaha xirmooyinka (kuwa takhasuska leh) ee labada qeybinta ay keenaan waa barnaamij bilaash ah iyo ilo furan maxaa yeelay mararka qaar aad ayey ugu kala duwanyihiin xaaladaha qaarna xirmooyinka mar hore waa duugoobeen waana joojiyeen horumarintooda, sida maktabadaha garaafka ee LabPlot ee fedora (aad iyo aad gaboobay) iyo maqnaanshaha qtiplot-ka ee fedora (waxaan u maleynayaa inuu kusii socdo ubuntu) taas oo ah waxa ugu dhow ee OriginLab taas oo dhanka kale qaali ah. Xaaladda noocan ah waxaan u arkay in ay jiraan cilado ka badan Ubuntu marka loo eego fedora, markaa isbeddelada isticmaalaha dhaqameedku waa kuwo la taaban karo oo dadka isticmaala gaarka ah xaaladaha qaarkood maahan, waa suurtagal in faalladaydu gabi ahaanba khaldan tahay sidaas darteedna waan raalligelinayaa. sidii aan ku iri bilowga waxaan ka hadlayaa oo kaliya khibrada cusub
Jawaab Javier del Cristo
oo leh fedora 16 gnome-shell waxay ka socotaa galabnimo iyadoo ay la socdaan wadayaasha bilaashka ah iyo hdxxx iyo sidoo kale kalidleyaal. In ubuntu iyo arch waxay igu dhacdaa ilaa heer aan ka dhigo mid aan la isticmaali karin (qaabaynta) Ma garanayo waxa ay fedora ku leedahay khiyaanooyinkeeda laakiin imika waxay leedahay faa iidooyin badan inta ka hartay inta ka hartay isku-darka gnome-shell dhiigga atis
Ku jawaab Ght
Hagaag, runtii waan ku qanacsanahay astaamahan cusub, oo had iyo jeer caan ku ah fedora, laakiin "usrmove" uma muuqato fikrad fiican mar dambe, gaar ahaan markaan aqriyay qoraal ku saabsan isticmaale fedora (aad u horumarsan?) "dhibaatooyinka» Marka la hadlayo, taasi waxay keeneysaa isbedelkaas iyo jahwareerka oo sidoo kale sameyn lahaa D:
maxaa yeelay runtu waxay sheegtaa waxyaabo fekerkeyga macno badan u sameynayo.
Loo heli karo LibreOffice 3.4.5 RC1 iyo 3.5.0 Beta tests